Ahoana ny fomba fiasan'ny Global Positioning System (GPS) ary inona no azonao zahana miaraka amin'izany? | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autisme / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Inona ny GPS?
Global Positioning System (GPS) dia rafi-pandefasana satelita izay mamorona fampahalalana momba ny toerana sy ny fotoana eo amin'ny faritra rehetra sy ny toetrandro ho an'ny mpampiasa azy. Namboarina avy amin'ny antokon-tsolin'ny 24 satellites sy ny toeram-piantsonan'izy ireo, ny rafitra GPS no vatsian'ny vola sy ny fanaraha-maso amin'ny ankapobeny ny departemantan'ny governemanta amerikana. GPS koa dia ampiasaina ho an'ny fanaterana fiara ao anaty fiara anisan'izany ny sambo, ny fiaramanidina, ny fiara, ny moto ary ny kamio. Ity rafitra ity dia manome hery be dia be ho an'ny miaramila sy ny sivily manerana izao tontolo izao, ny GPS dia manome fotoana maharitra, toerana 3D ary zotram-piarovana miaraka amin'ny fotoana manerantany. Azo lazaina ho fizarana telo izany:
Ny rafitra fanaraha-maso, fehezin'ny tafika amerikana
Ny fizarana mpampiasa: ampiasain'ny sivily sy miaramila manerantany
Ny GPS dia fomba iray hahazoana ny toerana tena misy zavatra iray na olona iray. Rafitra GPS fanaraha-maso, ohatra, angamba apetraka ao anaty fiara (A fiara), amin'ny fitaovana GPS manokana toy ny PDA na eny amin'ny finday aza. Mety ho kitay raikitra na portable izy io, miasa amin'ny fanomezana toerana marina izy io. Afaka manara-maso ny hetsika ny zavatra sy ny olona ihany koa. Ohatra, ny ray aman-dreny dia afaka mampiasa GPS manara-maso ny fihetsiky ny zanany eny an-tsekoly na mety ampiasain'ny serivisy irerenana mba hanaraha-maso ny fihetsiky ny kamiao mitondra entana.
Fotodrafitrasa rafitra fanaraha-maso GPS
Ny rafitry ny GPS dia mampiasa ny tamba-jotra Global Navigation Satellite System (GNSS). Tambajotram-pifandraisana iray izay mampiditra zanabolana zanabolana mampiasa signal signal microwave izay ampitaina amin'ny GPS no ahafahan'ny fitaovana manome vaovao momba ny hafainganana, ny toerana misy azy ary ny faritra misy azy miaraka amin'ny lalana. Noho izany, ny rafitra fanaraha-maso GPS dia afaka manome fitetezana ara-tantara na tahirin-kevitra amin'ny fotoana tena izy amin'ny karazana dia rehetra. GPS dia manome fambara satelita manokana izay karakarain'ireo mpandray, ireo mpandray ireo dia tsy vitan'ny manara-maso ny toerana misy ny signal fa afaka manisa ny hafainganan'ny fivezivezena ho an'ny zavatra mihetsika sy ny faritra misy ny toerana misy azy. Ny toerana tena izy dia azo tendrena tsara amin'ny alàlan'ny famantarana satelita 4 GPS hamokarana fijery 3D, ny sehatr'asa dia misy satelita GPS miasa 24 sy satelita fanampiny 3 raha toa ka tsy mahomby iray na maromaro. Ny satelita tsirairay dia mivezivezy manerana ny tany isaky ny 12 ora mandritra ny fandefasana signal radio izay raisin'ireo mpandray GPS.
Ahoana no hamaritan'ny GPS ny toerana iray
Ny fitsipika iasan'ny GPS dia mifototra amin'ny fitsipika matematika antsoina hoe "trilateration". Ny trilateration dia latsaka ao amin'ny karazany 2D sy 3D, mba hahafahana manao kajy matematika tonga lafatra ny mpandray GPS dia tsy maintsy mahalala zavatra roa. Voalohany ny toerana misy ny toerana eo ambanin'ny zanabolana telo farafahakeliny ary faharoa, dia ny tsy maintsy hahalalany ny elanelana misy eo amin'ny toerana sy ny satelita. Ireo rehetra ireo dia mifampiraharaha amin'ny famantarana izay nampita tamin'ny alàlan'ny onja elektromagnetika mihetsika amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana, ireo fihetsika ireo dia mitranga ao anatin'ny segondra. Ny toerana dia voafaritra lavitra ny halaviran'ny satelita refesina, zanabolana efatra no ampiasaina hamaritana ny toeran'ny mpandray raha mbola eto an-tany. Ny fanamafisana dia ataon'ny satelita fahefatra. Ny satelita telo ambiny dia ampiasaina hanarahana ny toerana misy ny tany satria GPS dia misy satelita, tobim-pahefana ary tobin'ny mpanara-maso. Ny mpandray GPS dia maka ny toerana misy ny zavatra avy amin'ny satelita ary mampiasa fomba antsoina hoe "triangulation" hamaritana ny toerana misy ny mpampiasa na ny zavatra.
Fampiasana sy fampiharana manokana an'ny GPS
Fanaraha-maso ny hetsika; mety ho very ianao na mitady hitady toerana iray manokana amin'ny faritra iray izay tsy dia fantatra loatra ampiasaina, azonao atao ny mampiasa GPS ny lalana mankany amin'ny alehanao
Famaritana ny elanelana misy teboka roa, ny GPS dia azo ampiasaina hamaritana ny elanelana marina eo amin'ny teboka roa
Mba hamoronana sarintany misy isa azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fampiasana manokana, ny sarintany google ary karazana sarintany hafa dia noforonina tamin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso GPS ary rafitra roa hafa
Mba hamaritana ny toerana misy azy; ohatra, miaramila iray mpiady dia mila maka fisafoana avy amin'ny fiaramanidina mpiady, mila ilaina ny fifandraisan'ny radio ary GPS ampiasaina hanondro ilay toerana manokana hisamborana azy.
Ny rafitra fanaraha-maso amin'ny fomba fijery samihafa
Ny rafitra GPS fanaraha-maso dia mety hiasa amin'ny fomba isan-karazany, amin'ny fomba fijery ara-barotra, araka ny voalaza teo aloha; GPS dia ampiasaina amin'ny firaketana ny toerana misy ny fiara avy amin'ny orinasa rehefa manao ny dia isan-karazany mankany amin'ny toerana alehany izy ireo. Ny rafitra sasany dia mitahiry ny toerana misy azy ireo indraindray amin'ny endrika lozisety eo amin'ny takelaka fahatsiarovana ao amin'ny rafitra fanaraha-maso GPS, izany no fantatra amin'ny maha-pasifika fanaraha-maso. Fomba iray hafa dia fomba mavitrika, alefa amin'ity fampahalalana ity dia isaky ny elanelam-potoana tsy tapaka, matetika io no ampiasaina. Ny fanaraha-maso GPS ao anaty fiara dia manampy be dia be satria ny fanadihadian'ny polisy hatrany no hanomboka eto raha toa ny nangalatra ilay fiara dia hanampy ny rafitra fanaraha-maso hamonjy ny toerana nalehany.
Fanaraha-maso finday finday, ny fitrandrahana ny finday dia efa mihoatra ny tanjona voalohany amin'ny fidirana amin'ireo mpampiasa raha finday. Ny finday ankehitriny dia efa mandroso ary manolotra mahasoa kokoa noho ny mitondra fotsiny na mampita hafatra amin'ny alàlan'ny Short Message Service (SMS). Ny fanenjehana GPS ny telefaona finday dia fandrosoana lehibe amin'ny teknolojia. Mandefa onjam-peo hatrany ny finday na dia tsy ampiasaina aza, dia fomba iray ampiasain'ny mpandraharaha finday foana izany hitadiavana finday amin'ny fotoana rehetra. Tato ho ato dia niasa ny fampiasa GPS ao amin'ireny fitaovana entin-tanana ireny ary amin'izao fotoana izao ny fanaraha-maso an-telefaona dia tsy mora sy marina mihitsy, ny fitsipiky ny triangulation dia ampiasain'ny satellita mba hitadiavana foana fitaovana iray. Ny teknolojia momba ny toerana dia mifototra amin'ny fandrefesana ny haavon'ny herinaratra sy ny làlan'ny antena miaraka amin'ny hoe ny fifandraisana finday dia mifandraika an-tariby tsy misy alàlan'ny serivisy base akaiky indrindra, rehefa fantatrao hoe inona ny biraon'ny tobin'ny finday iray miresaka aminao fa fantatrao hoe toerana lavitra izany matetika amin'ny fametrahana ny toerana misy ny 50m.
Ny maha-zava-dehibe ny rafitra fanaraha-maso GPS
Amin'ny alàlan'ny kintana nataon'olombelona dia azontsika fantarina ny toerana misy antsika sy ny toerana alehantsika amin'ny fotoana rehetra. Ny fitantanana sy ny toerany dia olana foana ho an'ny lehilahy taloha, tamin'ny fomba maoderina izao dia misaotra betsaka ny rafitra GPS. GPS ao anaty fiara, sambo, fiaramanidina ary na ny kamiao aza dia manamora ny fitetezana mora. Ny fitondra-tena (autopilot) dia mety noho ny GPS ihany.
15882 Total Views 10 Views Today